ခေတ်စားလာတော့မည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထဲက အနမ်းများ…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ခေတ်စားလာတော့မည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထဲက အနမ်းများ…။
ခေတ်စားလာတော့မည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထဲက အနမ်းများ…။
Posted by black chaw on Nov 15, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Celebrity, Creative Writing, News, Think Different | 51 comments
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ အနမ်းတစ်ပွင့်က ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုပါ…။
အထူးသဖြင့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာပေါ့…။
ငယ်ငယ်တုန်းကလို အာဘွားဆိုပြီး ပါးထိုးပေးလာသူတိုင်းကို အလွယ်တကူ နမ်းလိုက်လို့မရနိုင်တော့တာကိုတော့
မင်းသားတစ်ယောက်ကို ဟန်ဆောင် နမ်းရှိုက်လိုက်ဖို့ ဘယ်လိုအရာကများ ခက်ခဲစေခဲ့တာပါလိမ့်…။
အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့် ကတဲ့…။
ပုညခင် ရဲ့ ၀တ္ထုကို ဒါရိုက်တာဝိုင်းရိုက်မယ့် “ကျွန်မက နှင်းဆီပါမောင်” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ
မင်းသမီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရထားရာက အဲဒီ အနမ်းတစ်ပွင့်ကြောင့်ပဲ မင်းသမီးနေရာကို
နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားအောင် ကြော်ငြာဝင်ရရင် မင်းသားနေရာက သရုပ်ဆောင်မှာက
အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကြီးရဲ့ခင်ပွန်း…အကယ်ဒမီပြေတီဦး တဲ့…။
သူမက ဇာတ်ညွှန်းထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းကို ပြင်ပေးဖို့ ဒါရိုက်တာဝိုင်းကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့…။
ဇာတ်ညွှန်းရေးတဲ့သူကလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်းကိုယ်တိုင်ပါပဲတဲ့…။
မင်းသမီးက ပြင်ခိုင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းက ဘယ်လိုအခန်းမျိုးတဲ့လဲ…။
မိမိ မုန်းတီးလွန်းသူနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ရသည့် မိန်းမတစ်ယောက်၏ မင်္ဂလာဦးညတွင် ခင်ပွန်းသည်အား
မုန်းတီးနာကျည်းမှုဖြင့် နမ်းရမည့် ဇာတ်ဝင်ခန်း ပါတဲ့…။
စာရေးဆရာမပုညခင်ကတော့ ဘယ်လိုရေးဖွဲ့ထားခဲ့တယ် မသိဘူး…။
ဇာတ်ညွှန်းဆရာ ၀ိုင်း ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းထဲမှာတော့ အဲဒီ အနမ်း ပါတယ်တဲ့…။
၀ိုင်းဖက်က တုန့်ပြန်မှုကတော့ ရှင်းရှင်းပါပဲ…။
“ဒီရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားအတွက် အဓိကဇာတ်ဆောင်မင်းသမီး အပြောင်းအလဲလုပ်မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိပြောထားတဲ့မင်းသမီးက ဇာတ်ညွှန်းတစ်နေရာ မရိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်…။ မင်းသားမင်းသမီးဆိုတာ ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ပြီဆိုရင် ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်ပဲ ဖြစ်ရမှာပါ…။ ဇာတ်ညွှန်းကို ပြင်ဖို့ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့် မရှိပါဘူး”
အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ စဉ်းစားခန်းစခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ…။
သက်မွန်မြင့် က မနမ်းနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ အနမ်းက ဘယ်လိုအနမ်းမျိုးတဲ့လဲ…။
နှုတ်ခမ်းလေးတွေ အနမ်းစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အနမ်းမျိုးလား…။
ပါးပြင်ပေါ်က အနမ်းလောက်ဆိုရင်တော့ သက်မွန်မြင့် လို မင်းသမီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ မငြင်းသင့်ဘူးဗျာ…။
နှုတ်ခမ်းပေါ်က အနမ်းတွေဆိုရင်တော့လည်း တစ်မျိုးပေ့ါကွယ်…ခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပေါ့…။
အူဝဲ လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကြီးသာ ထည့်ရိုက်လိုက်ပါဗျာ…။
လင်မယားချင်းဆိုတော့ ပါးပြင်နဲ့ပဲ ခိုင်းခိုင်း…
မတော်…အဲဒီ အနမ်းပါတဲ့ အခန်းကပဲ သရုပ်ဆောင်တာ သက်ဝင်ပီပြင်လွန်းလို့ အကယ်ဒမီတွေဘာတွေတောင်ရသွားနိုင်သေးတယ်…။
အဲဒီ အကြောင်း ကျွန်တော် စဉ်းစားနေမိတာပါဗျာ…။
ကိုဘလက် မရိုက်ချင်လည်း ဦးနိုကြီး ပြောင်းထည့်လိုက်ပေါ့ ဒါလေးများ
ဦးနိုကြီး မရိုက်ရဲဘူးဆိုရင် လည်း ဦးကြီးမိုက်ကို ပြောင်းလိုက်ပေါ့
ကျမထင်တာကတော့ သက်မွန်မြင့်အနေနဲ့ ပါဆင်နယ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့ ( ထင်တာပြောတာပါ)
ဇာတ်ညွှန်းကို မင်းသမီး ၀င်မစွက်ဖက်ရဘူး ဆိုတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရမဲ့ ဇာတ်ရုပ်တခုကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်အကြံပေးမှုမျိုးတော့ ပေးလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်းက တဆိတ်လောက်များ အကဲဆတ်နေသလားလို့ပါ။ တခါတလေမှာ တချို့အကြောင်းရာများက မလိုအပ်ပဲ မာနခံနေတာနဲ့ ထင်တာထက်ပိုကြီးသွားတတ်ပါတယ်။ အနုပညာမာနတွေ ပိုဆိုးမယ် ထင်တယ်။
ကျမမှတ်မိသလောက် အဲ့ဒီ ၀တ္ထုထဲက အနမ်းက ခပ်ဖျော့ဖျော့နဲ့ အမုန်းနဲ့ နာကြည်းမှုစွက်နေတဲ့ အနမ်းမျိုးပါ။ ( သိပ်တော့ လည်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး )
အနုပညာဆိုတော့လည်း လိုအပ်လာရင် မရိုင်းအောင် ညှိပြီး ရိုက်မယ် ဆို ရိုက်လို့ရမယ်ထင်တာပါပဲ ။
ကျမကလည်း ဆိုက်ကိုလား မသိပါဘူး
နိုင်ငံခြားကားတွေ နမ်းတာ ကြည့်ရင် စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှမနေဘူး
( ဥပမာ Twilight ကားထဲ ရောဘတ်က ခရစ်စတင်းကို နမ်းတဲ့အခါ သိပ်လှတာပဲလို့ ထင်တယ်။ Noting Hill ထဲက ဟူးဂရန့်က ဂျူလီယာရောဘတ်ကို လူတွေအများကြီးကြားထဲ နမ်းတဲ့အခါ အရမ်းကို ရိုမန်းတစ် ဖြစ်တယ် လို့ ခံစားရတယ် )
ကျမတို့ မြန်မာကားတွေ နမ်းရင်တော့ ရင်ခုန်ရမဲ့ အစား မျက်စိရှက်တာမျိုး ဖြစ်မယ်ထင်မိတာပဲ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လဇင် အရ ဒါရိုက်တာ ပြောတာ (လုံးဝ) မှန်တယ်ခည..
မင်းသမီးဆိုတာဟာ ဇာတ်ကောင် တကောင် မျှသာဖြစ်လို့
ဇာတ်လမ်းကို ပြင်ခွင့်မရှိဘူး ဆိုတာ အပြည့်အ၀ မှန်ကန်ရဲ့…
ဆိုတော့ ဆက်ဆွဲရရင် ပြင်သစ်လိုပြော သရုပ်ဆောင်ရမှာမို့ ..ဇာတ်လမ်း
မရိုက်ခင် ၆လလောက် ပြင်သစ်လို တောက်လျောက် ပြောဆိုနေထိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်
တို့ မျက်မမြင်-ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပီပြင်အောင် မျက်စိအ၀တ်စီးပီးနေတဲ့ မင်းသား တို့..
အဟိ … အားနာပါဘိတောင်း ….။
ပြောရရင် အစကတည်းက လက်မခံပါနဲ့လားဗျာ… ။ ဒီမင်းသားနဲ့ဆို ဘာကားမှ
မရိုက်ပါဘူးဆိုပြီး။ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဈေးကွက်အရ ထိပ်ပိုင်းရောက်နေတဲ့မင်းသားမို့
လက်လွှတ်မခံဘဲ (အတိတ်ကတစုံတရာရှိခဲ့တယ်ပဲထား) ရိုက်တယ်။ ပိုက်ပိုက်ရဖို့
စိတ်ထဲက အောင့်သက်သက်ပေမယ့် ။ တကယ်တမ်း ပီပီပြင်ပြင် ရှလူးရမယ့် ဟာလည်း
တွေ့ရော … အောင့်သက်သက်တွေက မခံစားနိုင် ဖြစ်လာပြီး ပင့်သက်မရှူနိုင်တာလို့
မြင်မိတယ် .. ပါဆင်နယ်နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မကွဲတဲ့ နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတပုဒ်
ဆိုပါတော့ဗျာ…ချဉ်ထှာ ..လုံးဝ (လုံးဝ) အားမပေးတော့ပါ.. အဟတ်..
ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ ပြီတည်ဦးကြီးတော့ နမ်းမနေနဲ့။
သူကြီး ပြောတဲ့ စကားကို ဖြင့် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ မှတ်သားသွားပါ၏။
ဟုတ်ပါ့ ‘ကျွန်မက နှင်းဆီပါ မောင်’ ဆိုမှတော့ မင်းသမီးဇာတ်ပေ့ါ..
မင်းသမီးဇာတ် မင်းသမီးပြောင်းတော့ မကောင်းတော့ဘူးပေါ့…
ကိုဘလက်ခမျာ သွားရေတွေကို တတောက်တောက်ကျအောင် အနမ်းပန်းတွေအကြောင်း
စာစီထားရတာ….မင်းသားနေရာမှာ ချောတဲ့ ဘလက် ‘ဘလက်ချော’ ပဲ ထည့်ရိုက်လိုက်
ကဲ ကိုဘလက်ချောရေ မင်းသားလုပ်မလား ပြောဗျာ။ မင်းသားမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်
နောက်လုပ်ရမယ့်နေရာက လူကြမ်းတဲ့နော်။ ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်ရိုက်တန်းစော့ဖြစ်ရင်
ဇတ်ညွှန်းတခုလုံးတောင် ရိုက်နေရင်း သူ့ဟာသူပြောင်းပစ်တာ….
အင်း… လုပ်လို့မရတဲ့လူကျတော့လဲ မရဘူးပေါ့…
လိုရင်းက ၊ ပြေတီဦး နှင့် သက်မွန်မြင့် မို့ပါကွယ် ။
ဒါရိုက်တာ ကလည်း တမင်များ သူ့ကားပေါက်အောင် လုပ်သလားပဲ ။
ကြော်ငြာကောင်းလွန်းလို့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ ၀တ္ထုရှာဖတ်ရတော့မယ်။ လွန်းထားထားလား ပုညခင်လား ။ pdf နဲ့ ebook လေးများရှိကြသလား။
နမ်းတဲ့ကိတ်စ ဆင်ဆာမဖြတ်တော့ဝူးဆိုကထဲက ဟော့ ဖြစ်လိုက်တာ ဟိုကားလဲနမ်း ဒီကားလဲနမ်း အကျိုက်ကိုနမ်းပျကျတော့တာဗျ။ သူရို့ဖာသာ နမ်းချင်နမ်း မနမ်းချင်နေ မြန်မာရုပ်ရှင်တေ ခပ်ညံ့ညံ့ဖြစ်နေတာကတော့ အရင်လိုဘာဘဲဗျာ။
ယောက္ခမ လုပ်သူ ရ-ယ-က အုပ်ကထ ကို သားမက်လုပ်သူက
ပြန်ပြောတဲ့ အခန်း ပါရင်ကော ဆင်ဆာ ဖြတ်သေးလား …။
ရဲ ကို လူဇိုးက ဖမ်းပြီး နှိပ်စက်တဲ့ အခန်းပါရင်ကော .. ပိတ်ခံထိသေးလား
အဲ့လာမျိုးတွေ ကျ မဆွေးနွေးဘူး အာပွားရှလူးတာပဲ လွှတ်ပေးမှတော့..
ဟိုကားဒွေပဲ ထွက်လာတော့မှာ မြင်ယောင်သေးတော့တယ် …အဟတ်…
နမ်းတာမှာ.. အနုပညာရှိတယ်လို့.. နင်တို့လို.. အခန်းတခါးဖွင့်.. မီးခလုပ်လက်နဲ့စမ်းဖွင့်နေရသူတွေ.. မသိနိုင်ပါ.. မသိနိုင်ပါ..
အိမ်တံခါးလေးလှပ်အပြီး remote control လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့
မီးခလုတ် စမ်းစရာမလို တစ်အိမ်လုံး မီးလင်းတဲ့ခေတ် ရောက်နေပြီရှင့်….
ဒါ့ကြောင့် အခန်းတံခါးဖွင့် အမှောင်ထဲ မီးခလုတ် လက်နဲ့စမ်းဖွင့်
နေတော့စရာမလို…..အိုက်ဒါ သဂျီးတို့ခေတ်တုန်းကပဲ နေမှာ….
ပြီးတော့ သူကြီးသည် စာလုံးပေါင်း မှားနေပါသည်…’ မီးခလုတ်’ ပါ…
တံခါးအလှပ်… တံခါးကြားထဲ.. လက်ညပ်နေပြီးမှ.. . မီးခလုတ်တောင်ပြင်ပေးသွားသေးတယ်..
မိနေတဲ့ တစ်ယောက်က ‘တဂျီး’
အိုက်ဒါ သဂျီးချစ်ချစ်က သဂျီးရုံးအပြန်နောက်ကျလို့ စိတ်ကောက်ပြီး
မဖွင့်ရာကနေ ကိုယ့်ဟာကိုဖွင့်လိုက်ရလို့ ညပ်သွားရတဲ့လက်….
နော်က ခေတ်သစ်ထဲမှာ နေတာ..မီးခလုတ်လည်း မပြင်တတ်ဘူး..
ဘာပျက်ပျက် လူခေါ်ပြီး သေးသေးလေးကအစ အုံလိုက် လဲပစ်လိုက်တာပဲ
ကိုဘလက်ရေ လွန်းထားထားနဲ့ ပုညခင် တယောက်ယောက်ကတော့ မှားနေပြီထင်ပါရဲ့။
အပေါ်မှာ လွန်းထားထားရေးတယ်လို့ ပြောထားတော့ အမှန် လွန်းထားထားဘဲလား။
နမ်းတာကတော့ အကယ်ဒမီညဆို နမ်းကြတာဘဲ။ အဲဒီကအကွက်ကို ယူပြီး၊ ဒီမှာထဲ့ပေါ့။
မောင်ဝိုင်းက နဲနဲတော့ ကီးမြင့်ပုံပေါက်တယ်။
နောက်တက်လာတဲ့အထဲ ကိုပေါက်(စိုးကျော်ဆန်း) နဲ့ သူ့ကို (သရုပ်ဆောင်)ဒါရိုက်တာတွေ
ဟိုးအစတုန်းကတော့ ယောက်လုံးတင်ပြပုံ ထူးခြားကြပါတယ်။
ဟိုးအစတုန်းကတော့“၂ “ယောက်လုံးတင်ပြပုံ ထူးခြားကြပါတယ်။
အင်း … ညန်မာ့ညန်မာ့ ရုပ်ရှင် အကြောင်း ဥာဏ်မမီတာလေးတခုမေးပါရဇီဗျာ
ကားကြီး ခေါ်တဲ့ ရုပ်ရှင်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ပါဗျာ…
ဖလင် ရှား သတဲ့ .. ဖလင် ဈေးကြီးသတဲ့ …။ ဆိုတော့ ရီဟာဇယ် သေချာလုပ်သလား
ဆိုတော့လည်း ညင်းညင်း … ကားလေး တပါတ် ကားကြီးတလ နှုန်းလောက်
ဘဘဘလက်တို့ သဂျီးတို့ရေ ..မိဂီ ဥာဏ်မမီတာက ဖလင်ရှားတယ် အော်တာ
ဆန်ရှင်ကြောင့်လား ဈေးကြောင့်လား ..ဘာကြောင့်လဲ ..နည်းနည်းမှ စဉ်းစားမရ၀ူးခည
ရှာရွန်စတုံး ဆိုလား ..အဲ့မင်းသမီးကြီးရဲ့ ဘေ့ဇစ် အင်းစတင့် တူး ဆိုလား ..အဲ့ကား
ရိုက်တော့ ..အင်္ဂလိကန် ဘောလုံးစတားဟောင်း စတန်ကော်လီမိုး နဲ့ ကားရေထဲ
ထိုးကျတဲ့အခန်းလေ.. အဟိ … အဲ့လာရိုက်တာ စိတ်ကြိုက်ရဖို့ ဖလင်ပေ ဘယ်နှထောင်
ဆိုလား အဆုံးခံတယ် လို့ ဖတ်ဖူးသလားရယ်ပါဗျာ …
၀တ္ထု ပုညခင် ခင်ဗျ…
အိုဘားမား စီနင်းလာမည့် Air Force One လေယာဉ်ကြီး
ပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။ ကိုဘလက်က မေးထားတာရှိလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ရေးသူက (ကို)ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ပါ။ လင့်ခ်က
Air force one အများအထင်မှာ ၊ လေတပ် (၁) (Air force one) လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ၊ သမ္မတတံဆိပ် နဲ့ အမေရိကန် အာဏါ (ပါဝါ) ကိုဖေါ်ပြတဲ့ ဘိုရင်း (၇၄၇) လေယဉ်ကိုဘဲ မျက်စိထဲ မြင်မိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်က လေတပ် (၁) (Air force one) ဆိုတာက လေယဉ်ကို သတ်မှတ်ပေးတဲ့ (call sign) လို့ခေါ် တဲ့ လေယဉ်နဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ နံမည်သတ်မှတ်မှုပါပဲ။ လူတွေကို မောင်ဘ ၊ မောင်လှ ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်အောင် နံမည် ပေးကြသလို ၊ လေယဉ်တွေမှာလည်း ဆက်သွယ်တဲ့ အခါ သိသာ အောင် (call sign) သတ်မှတ်ပေး တာပါ။ ဘယ်လေယဉ် မဆို အမေရိကန်သမ္မတ လိုက်ပါလာတဲ့ လေယဉ်ကို လေတပ် (၁) (Air force one) လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဒီလိုသတ်မှတ်ရတဲ့ ရာဇ၀င်ကလည်း ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာ သမ္မတ အိုင်စင်ဟာဝါ စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ လေယဉ် (လေတပ် ၈၆၁၀) ဟာ Eastern Airline လေယဉ် အမှတ် ၈၆၁၀ နဲ့ သတ်မှတ်လေနယ်ပယ် (air space) တစ်ခုမှာ call sign ချင်းလာတူနေတဲ့ အတွက် ၊ နောင် မမှားရလေအောင် သမ္မတလေယဉ်ကို လေတပ် (၁) (Air Force (1) ) လို့သတ်မှတ် ခဲ့ရ တာပါ။ တကယ်တော့ မျက်စိယဉ်နေကြတဲ့ ဘိုးရင်း (ရ၄ရ) ပင် (၂) စီးရှိပါတယ်။ သမ္မတပါလာတဲ့ လေယဉ် ကိုမှ အဲဒီအချိန်မှာ လေတပ် (၁) (air force (1)) လို့ သတ် မှတ်ပါတယ်။
သမ္မတအတွက် အထူးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဘိုးရင်း(၇၄၇) နှစ်ဆင်းကို မြို့တော်ဝါရှင်တန် အပြင် ဖက် မေရိ လန်မှာ ရှိတဲ့ အင်တရူးလေတပ်စခန်းမှာရှိတဲ့ (၈၉) လေတပ်ထောက်ပံ့တပ် airlift wing ကတာ ၀န်ယူ ထိန်းသိမ်း ရပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့် ကိုယ်တိုင်တပ်ရင်မှူး ဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင်လေ ယာဉ်မှူး အဖြစ် တာဝန်ယူ ရပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အတွက် အမေရိကန် သမ္မ တခရီးစဉ်မှာ စီးဖို့ကား (the Beast) ကအစ တခါတရံ ရဟတ်ယဉ် ပါ C130 ပစ္စည်း တင် လေ ယဉ်ကြီး တွေ နဲ့ အရင် သယ်ချလာကြပါတယ်။ လိုအပ်လျှင် အမေရိကန် လုံခြုံရေး နဲ့ လက်ဖြောင့် တပ်သားတွေပါ လေယဉ်ကွင်း တွေမှာ ချထားလေ့ရှိပါတယ်။ သမ္မတလေယဉ်ဟာ ဆီဖြည့်ပြီး အမြဲ အဆင် သင့် ပြင်ထား ရပါတယ်။ လုံခြုံရေး စိတ်မချရသည့် နိုင်ငံများ ခရီးစဉ်တွင် လေယဉ်နှစ်စီးလုံး သေခြာရန် ယူဆောင် လာ လေ့ရှိသည့် အပြင် ဓါတ်ဆီတွေ ပါသယ်လာလှေ့ရှိပါတယ်။
သို့သော် အမေရိကန်သမ္မတ လေယဉ်အတွက် တိုက်လေယဉ် အစောင့်မထားပါ။ အကြောင်းမှာ ဘိုရင်း (၇၄၇) လေယဉ် နှစ်ဆင်းလုံးတွင် ဒုံးကျည် များကို ရှောင်ထွင်းနိုင်သော နောက်ဆုံးပေါ် လျှပ်စစ်ကရိယာ များ တပ်ဆင်ထား၍ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ့ heat seeking missile ဟုခေါ်သော (အပူ) ကိုရှာသော ဒုံးကျည်များကိုလမ်းလွှဲရန် ထန်ပြန်းဒုံးကြည်များပါသလို အခြား ခေတ်ပေါ် ထန်ပြန်လျှပ်စစ် ကရိယာများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ တကယ်တော့ အဲဖို့ဝမ်းဆိုတာ သမ္မတတစ်ယောက် အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆက်သွယ် ရေး ကရိယာ တွေ အကုန်ပါသည့် အပြင် အကူရုံးသားအားလုံးကို တင်ဆောင်နိုင်သော လေပေါ် သမ္မတ ရုံခန်း တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
(၉-၁၁) ဟုနံမည်ကျော်သော ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလ ၁၁ နေ့က နယူးရောက်မြို့ နှင့် ၀ါရှင်တန်မြို့တို့ အတိုက်ခံရစဉ်က ဘာမှန်း မသိနိုင်သည့်အတွက် ၊ သမ္မတဘုရ် စီးလာသောလေယဉ် အတိုက်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် သာတိုက် လေယဉ် အစောင့်အရှောက် တောင်းဖူးသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် သမ္မတ နစ်ဆင်သည် ဆီးရီးယား နိုင်ငံသို့ ရပ်နားမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ရပ်နားရန် ပျံသန်းစဉ် ဆီရီးယား စစ်တိုက်လေယဉ်များက အကြောင်းမကြားပဲ စောင့် ရှောက် ရန် ချဉ်းကပ်လာကြရာ အဲဖို့ဝမ်း ခမြာ အတင်းထိုးဆင်း (Dive) လုပ်ကာ ရှောင်ထိန်ခြင်းပြုခဲ့ရဖူးသည်။ သမ္မဘုရ် မကြေ ငြာပဲ အန္တရာယ်များသော အီရတ်သို့ တိပ်တစိပ် ပျံသန်းနေစဉ် ခရီးသည်တင် လေယဉ်မှူးတဦးက အမေရိကန်သမ္မတ တံဆိပ်ကြီးနှင့် လေယဉ်ကို တွေ့၍ အဲဖို့ဝမ်း မဟုတ်လားလို့ လှမ်းမေးသည့်အတွက် ဗျာများခဲ့ရဖူးသည်။
သမ္မတ ကနေဒီ လုပ်ကြံခံရပြီး သမ္မတ ဂျွန်ဆင် ဟာ ကျန်ရစ်သူ ဂျက်ကလင်းကနေဒီ ၏ရှေ့မှောက်လေယဉ် ပေါ်မှာပင် ကျမ်းသစ္စာခံယူခဲ့ ပုံကို မည်သူမှ မေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ရာဇ၀င် တင်ခဲ့သော ဓါတ်ပုံတစ်ခုပင်။ ယင်း လေယဉ် ၏အမည်ရင်းမှာ Speical Airforce Mission (SAM) 26000 အမည်ရှိသော ဘိုရင်း ၇၀၇ လေယဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ဤလေယဉ်နှင့် ပင် သမ္မတ နစ်ဆင် သည် ရာဇ၀င်တင်ခဲ့သော ဖေဖေါ်ဝါရီ ၊ ၁၉၇၂ ခုနှစ် တရုတ် ပြည် ခရီးစဉ် နှင့်ထိုနှစ်နှစ်ဟောင်းပိုင်းတွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ခရီးစဉ် တို့ကို သွားရောက်ခဲ့ သည်။ ခရီးစဉ် နှစ်ခုလုံးမှာ အမေရိကန်သမ္မတ အတွက် ပထမဦးဆုံး ခရီးစဉ် များဖြစ်သည်။
အခုခေတ်မှာမှ အမေရိကန် သမ္မတတဦး ခရီးထွက်ဖို့ရာ အစောင့်အရှောက်တွေက တဖုံကြီး။ သမ္မတကို စောင့်ရှောက်ရသော secret service ဟုခေါ်သော သက်တော်စောင့် တွေက ၀ိုင်းရံလျှက်။ မမြင်ရသော အကြို ပြင်ဆင်ရသော အမေရိကန် စစ်သည်တွေက ပို၍ပင်များသေး။ မပိုလွန်းဖူးလား လို့ထင်စရာ။ အကုန်အကျ များလိုက်တာလို့ ထင်စရာ။
တချိန်က သမ္မတစံအိမ်တော်ကို တံခါးသွားခေါက်လျှင် လာဖွင့်ပေးသူမှာ သမ္မကိုယ်တိုင် ရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ဆိုလျှင် ယုံနိုင်ဖွယ် မရှိ။ ၁၉၀၁ ခု ၊ ၂၅ ယေက်မြောက်သမ္မတ ၀ီလျှံမက်ကင်းလီ အသတ်ခံရပြီး မှာ ကွန်ကရက်က စီးကရက်ဆာလ်ဖစ် ကို သမ္မတကို စောင့်ရှောက်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန် ရာဇ၀င်မှာ သမ္မတ (၄) ဦး အသတ်ခံရဖူးပြီး (၂) ယောက် မသေသော်လည်း ဒဏ်ရာရဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့အချိန်အခါတွင် သမ္မတစ်ယောက် ၏အသက်ကို ကာကွယ်ရန်မှာ အလွန်လိုအပ်သော တာဝန်ဖြစ် လာရပေသည်။
မက်ကင်းလီ သည် လူထုနှင့် ထိတွေ့ရသည်ကို သဘောကျ၍ ၎င်းအတွက်လုံခြုံရေးကို လက်မခံခဲ့ပေ။ ၎င်း၏အတွင်းဝန်က စိုးရိမ်၍ ၎င်း၏ခရီးစဉ်ကို (၂) ကြိမ်ဖျက်ခဲ့သော်လည်း သမ္မတက ပြန်လည် ထဲ့သွင်း ခဲ့သည်။ သေဖို့ရာ ကံ ပါဘာသည်လို့ပဲ ဆိုရမလားမသိ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိစိုးရိမ်၍ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များက လုံခြုံရေး အားဖြည့်ခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်က လက်မခံခဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်ကို ဆုံရှူံးခဲ့ ရသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာဇ၀င် လမ်း ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ဤကဲ့သို့ အန္တရယ် မျိုးကိုစိုးရိမ်၍ အမေရိကန်တွေက ကုန်ကျမှုကို ဂရုမစိုက်ကြတော့။ လုံခြုံရေးကိုသာ ဂရုစိုက်ကြသည်။ ဒေါ်စု သွားတုန်းက ပေးသော လုံခြုံရေး ကို သာ ကြည့်လျှင် မြင်သာပါသည်။
တရုတ်သမ္မတ ရန်စီမင်းလက်ထက် ကတရုတ်သမ္မတ အတွက်လေယဉ်ကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံရန် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို အပ်နှံမိရာ စီအိုင်အေက လျှို့ဝှက် အသံဖမ်းစက်တွေ တပ်လွှတ်လိုက်၍ ပြဿနာ တက်ဖူး သည်။ ယ္ခုခေတ်မှာတော့ ချမ်းသာသည့် နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံ့ထိပ်သီးတွေ အတွက် ကိုယ်ပိုင်လေယဉ် ထားနေ ကြပေပြီ ။
လက်ရှိ ဘိုရင်း ၇၄၇ နှစ်ဆင်းကို အစားထိုးရန် လေတပ်က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာ ပထမ ၇၄၇-၈ (သို့) Airbus A380 နှင့် အစားထိုးရန် စဉ်းစားကြသော်လည်း Airbus ကိုထုတ်လုပ်သည့် EADS ကုမ္ပဏီက နောက်ဆုတ် သွားသည့် အတွက် ဘိုရင်း ၇၄၇-၈ (သို့) ဘိုရင်း ၇၈၇ (Dreamliner) ဖြစ်ဖို့သာ ရှိပါတယ်။ သမ္မတအတွက် လေယဉ်အသစ် (၂) ဆင်းဟာ ၂၀၁၇ မှာ စတင်ပျံသန်း နိုင်လိမ့်မယ် လို့ လန့်မှန်းကြပါတယ်။
သမ္မတ လိုက်ပါတဲ့ ရဟတ်ယဉ်ကို မရင်းတွေက တာဝန်ယူရသည့် အတွက် မရင်း (၁) လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
Credit to (ကို) ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
အသေးစိတ်ပါပဲလား ..စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာမို့ ဘဘဘလက် ကိုယ်စား
ရုပ်ရှင်အကြောင်းပိုစ့် ရုပ်ရှင်နဲ့ စပ်ဆက်ကြည့်ရင်တော့
ဟောဒါလေး ရှိသဗျ… မင်းသားကြီး ဟယ်ရီဆင်ဖိုဒ့် ရဲ့နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်
အဲဖို့ဝမ်း ဆိုတာ လေယာဉ်ကို အစွဲပြု ခေါ်တာမဟုတ်ဘဲ
သမ္မတ စီးတဲ့လေယာဉ်ကို ပညတ် တာသာဖြစ်ကြောင်း
နောက်ဆုံး သမ္မတက ဟိုဘက်လေယာဉ်ကို ကြိုးနဲ့ကူးသွားပြီး
ဟိုဘက်ရောက်တော့ လေယာဉ်မှူးက ဒီလေယာဉ်ဟာ အဲဖို့ဝမ်း
ဖြစ်သွားပါပြီ ဆိုပြီး သမ္မတကို အလေးပြုပြီး ပြောတဲ့အခန်းလေးဗျ..
The Mask ထဲက ဂျင်မ်ကာရေး ရဲ့ အနမ်းရော မကြိုက်ဝူးလား။
ကင်မရွန်း ဒီယက်ဇ်ကြီး ခြေမတောင် ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားပြီး
ဒေါက်ဖိနပ် ဒိုင်းကနဲ ကျွတ်ထွက်သွားတဲ့ အနမ်း။
ဟိုတစ်ခါ ဟီလာရီလာတုန်းက ကိုသစ်က ပို့်စ်တင်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျ…။
အခု အိုဘားမားကြီးဆိုတော့ ဟီလာရီထက် ပိုတဲ့ ခေတ်လွန်လုံခြုံရေး စီမံမှု
တွေ ရှိမှာပဲ ဆိုပြီး ကိုသစ်ရေ အဲဒါလေး ပို့စ်တင်ပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုခဲ့မိပါတယ်…။
ဆရာသမားက ပို့စ် မတင်ပဲ ကွန်းမန့် ရေးပြီး ရှင်းပြသွားတယ်…။ လူဆိုး…။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးအထူးပါ ကိုသစ်ရေ…။
အဲသည့်မင်းသားမို့ မနမ်းနိုင်ပါဘူးဆိုရင် နမ်းတဲ့အခန်း မင်းသားကိုယ်စား လူစားထိုးလိုက်ပါ…..
ကျွန်တော် မောင်ကျောက် အနုပညာကြေးမယူဘဲ လူပြို့ဂုဏ်ရည် အပျက်ခံပြီး ကူညီပါ့မယ်….
အဟဲ…. အသားတော် ၀ါဝါ၀င်းသွားအောင်တော့ မိတ်ကပ် ထူထူလေး လိမ်းပေးပေါ့ဗျာ…
ဒါပေမယ့် ဇာတ်ဝင်ခန်းခေါင်းစဉ်ကြည့်ယုံနဲ့ဒီအခန်းက ဘယ်လောက် ဇာတ်ရှိန်မြင့်စေလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်…….
သက်မွန်မြင့် ခါတဲ့ခေါင်းက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတော့ မဖြစ်နိုင်ဂျောင်း…..
ပြေတီဦး ကိုယ်တိုင်က နာမည်တွေ ထွက်နေတဲ့ အတွက် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေလိုတာက တဂျောင်း…….
သက်မွန်မြင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုထိ ကင်းရှင်းတယ်လို့ထင်ရဂျောင်း…………
ပီးတော့ မြန်မာမိန်းကလေး တယောက်အနေနဲ့အခုထိ ရီးစားသက်တမ်း ခြောက်နှစ်ရှိတာတောင်…. လက်မကိုင် ဖူးတဲ့ အတွဲတွေ့ ကို မြင်ဖူးဂျောင်း…….
မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တချို့တချို့ သော သူတွေက လစ်ဘရယ် ဆန်ဆန်ပြောပီး လူရှေ့မှာ နမ်းရဲလောက်အောင် မျက်နှာပြောင် တိုက်ရဲ ကြပေမယ်….
တချို့ တချို့ သောမိန်းကလေးက မြန်မာမိန်းကလေးဆိုတဲ့ဂုဏ်ကို ထိန်းသေးတယ်ဆိုတာက တဂျောင်း……
မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ထိုကဲ့သို့ ဇာတ်ကားမျိုးသည် မြန်မာအနုပညာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် အစိမ်းဖြစ်ကြောင်း…….
(သူတို့ ဘာသာ ကန့် လန့် ကာနောက်မှာ လုပ်ချင်တာ လုပ်မှာပေါ့နော်….. အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ မပါကြေး…..)
ကန့် လန့် ကာရှေ့ အတွက် အစိမ်းဆိုတာ အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးဟေကို တို့ လို နာမည်ပျက်ဖြစ်စေ အူဝဲ ဒါဒါတို့ လို အဘွားကြီးတွေနဲ့ သာ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးသင့်ကြောင်း…….
သက်မွန်မြင့် ငြင်းခြင်းသည် ငြင်းပိုင်ခွင့်အပြည့်အ၀ရှိကြောင်း…..
၀ိုင်းသည်သာ သက်မွန်မြင့် ငြင်းနိုင်သည်ကို သိသိနဲ့တမင်တကာ သိက္ခာချခြင်းသတ်သတ်သာဖြစ်ကြောင်း…..
ထိုအမှူအား ရုံးတော်မှ သတ်မွန်မြင့်အား အနိုင်ပေးလိုက်သည်…….
ရီးစားသက်တမ်း ခြောက်နှစ်ရှိတာတောင်…. လက်မကိုင် ဖူးသေးဘူးဆိုတာတော့
သူ့ကျွန် မခံလိုပြီထဲမှာ ကျော်ရဲအောင် ဘုရင်ကို လျှောက်သလိုပြောရရင်
ယောက်ျားသွေးနည်းရာ ကျပါသဖရား… ယောက်ျားသွေးနည်းရာ ကျပါသဖရား…
အဲ့ဒါ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဗျ……….. ဟီး……….
ကောင်မလေးကပြောတယ် နင်ငါ့အသားထိရဲထိကြည့် ငါ့အိမ်ကထင်းချောင်းတွေလို့အပိုင်းပိုင်း ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့……
ပါးချလိုက်ရလို့ပါးရှစ်စိတ်ကွဲသွားမယ်ဆိုတာကို ထွင်ပီးပြောလိုက်ပုံရပါတယ်
ကောင်လေးခမျာ မျက်နှာတောင် စေ့စေ့မကြည့်ရဲတော့ဖူးတဲ့……………..
ဦးကျောက်ပြောပုံအရ ဦးကျောက်ကိုမင်းသားတင်ဖြစ်ရင်မိတ်ကပ်ထူထူ လိမ်းမဲ့အစား ဆနွင်းလိမ်းရင်ပိုအဆင်ပြေမဲ့ပုံပါဘဲ
ညံ့ဖျင်းလှတဲ့အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာရုပ်ရှင်ကားများကတော့ နမ်းနမ်း မနမ်းနမ်း မဝေဖန်တတ်ပါကြောင်း နဲ့
ဘာပဲပြောပြော Pooch ပြောသလို မြန်မာကားတွေနမ်းတာကိုကြည့်ရမှာတော့ ကိုယ့်အမျိုးတွေနမ်းတာကိုကြည့်ရသလို ရှက်မိမှာပဲ။တညိုးကြီးရှင့်။
ရည်းစားဘဝရဲ့ အမှတ်အသားလေးတွေကစ် ကစ် ကစ် ခွင့်ပြုမိန့် နဲ့ တကိုယ်လုံးနှိပ်မယ် ကစ်စ် ကစ်စ် ..ကစ်စ် .. နောက်ဘဝ အထ်ိသတိရအောင် ကစ်စ်……ရည်းစားဘဝရဲ့ အမှတ်အသားလေးတွေ ကစ်စ်…
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကိုင်ဇာ သီချင်းကို သတိရသွားလို့ ဟီး ဟီးး
နောက်ဘဝအထိ သတိလစ်အောင် ကစ်စ် ကစ်စ် ကစ်စ် လို့ပြောင်းဖတ်ပေးကြပါ။
မှတ်မှတ်ရရ ကြိုက်မိတဲ့အနမ်းလေး (၃)ခုကို သတိရမိသဗျ…
Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest ထဲမှာ ဂျက်စပဲရိုး (ဂျော်နီဒက်ပ်) ကြီးကို နမ်းချင်ယောင်ဆောင်ပြီး တစ်ပတ်ရိုက်သွားတဲ့ အဲလစ်စဘက် (အသဲလေးကီယာနိုက်တလီ)တို့ရဲ့အပေးအယူမျှမျှ သရုပ်ဆောင်ပုံလေး အတုယူစေချင်တယ်…
Entrapment ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဂျမ်းစဘွန်းမင်းသားကြီးရှောင်ကွန်နရီက သူ့အသက်တစ်ဝက်လောက်ပဲ
ရှိတဲ့ ဦးဘလက်ရဲ့အသဲစွဲ ကက်သရင်းဇီတာဂျုံးကြီးကို အနေနီးရာကသံယောဇဉ်တွေဖြစ်ရာက အနမ်းလေးတွေနဲ့… ကြည့်လိုက်စမ်းပါ…
Spiderman2မှာ ပီတာပါကာနဲ့ အမ်ဂျေ (မယ်ရီဂျိမ်း)တို့ မိုးထဲရေထဲ စပိုင်ဒါမန်းကိုဇောက်ထိုးကြီး
ဆင်ဆာလျော့ပေးတယ်ဆိုတာ မင်းသားမင်းသမီးနမ်းပြဖို့ထက် ပိုမိုပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ခန်းတွေထွက်လာဖို့ပါ…
ဒီနေရာမှာ မင်းသမီးသက်မွန်မြင့်အနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကို မကြိုက်ရင်အစကတည်းက လက်မခံရုံပါဘဲ… လက်ခံပြီးရင်တော့ မင်းသမီးအနေနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းပြင်ဖို့ပြောစရာအကြောင်းကို မရှိတာပါ…
ဂီဂီပြောသလိုဆိုရင်တော့ Pro မဆန်တဲ့တော်တော်ရုပ်ပျက်တဲ့ကိစ္စပါ…
လစ်ဘရယ်ဆိုတာ ဂုဏ်မထိန်းရဘူးလို့ဆိုနေတာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းလဲ သိစေချင်ပါတယ်…
မြန်မာမိန်းခလေးတစ်ယောက် အရက်သောက်ဖို့အားပေးတာ… လူရှေ့သူရှေ့နမ်းဖို့အားပေးတာ လစ်ဘရယ်မဟုတ်ကြောင်းလဲ သတိထားစေလိုပါတယ်…
လစ်ဘရယ်ဆိုတာ မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ကို မိမိတာဝန်ယူပြီး ခေတ်ကာလနဲ့မလျော်ညီတော့သော
ပြုပြင်သင့်သည့်အတွေးအခေါ်အယူအဆများအား ရဲရဲဝံ့ဝံပြုပြင်တတ်ခြင်းအား လစ်ဘရယ်လို့ဆိုရမည်
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီး မာရီလင်မွန်ရိုးအကြောင်းဖတ်ရင်း
The Seven Year Itch ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှာ မြေအောက်ရထားဖြတ်အသွာ စကဒ်အတိုလေးဝတ်ထားတဲ့
မွန်ရိုးစကဒ်ကို လေတိုက်လို့ လန်သွားတဲ့အခန်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်ရိုက်ခဲ့ရတယ်တဲ့…
မင်းသမီးစကဒ်လန်ကို လန်တယ်ဆိုတာထက် ဇာတ်လမ်းရိုက်ကွက်ရဲ့အရေးပါမှုအနေနဲ့ ကြည့်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာပါ… အဲဒီအတွက်ကြောင့် အဲဒီပုံလေးဟာ မွန်ရိုးအတွက် Symbol တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး…
မြန်မာ့မြန်မာ့ရုပ်ရင်… ပစ္စည်းမစုံလင်… စက်အစုတ်နှင့်ပင်… စင်ပေါ်အရောက်တင်…
မြန်မာ့မြန်မာ့ရုပ်ရှင်… ငွေကြေးမစုံလင်… သုံးရက်နှင့်ပင်… စင်ပေါ်အရောက်တင်….
ရိုက်ချင်တာရိုက် ရိုက်ချင်တဲ့လူနဲ့ရိုက် ပီပြင်အောင်သာရိုက် ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ဇော်ကန့်လန့်တွေသာထွက်မလာနဲ့
မြန်မာကားထဲ နမ်းတဲ့ အခန်းတွေ ပါနေပြီ ဆိုလို့ ညွှန်ပေးကြပါဦး ဗျာ
၀ိုင်း ကို ပြောပေးပါဗျာ
ကျွန်တော့်ကို ခဏပဲစောင့်ပါ၊ ကျွန်တော်နဲ့ ဆို သက်မွန်မြင့်လေး က ရိုက်မှာ သေချာပါတယ်
မနေ့ က ပြောခိုင်းတဲ့ အတိုင်းပြောလိုက်တယ်
ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ အခု ရပ် ဆိုတော့
ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲ ကျုပ်တို့က ကျုပ်တို့ ဆရာချော ပြောတဲ့စကားက လွဲလို့
ကြည့်ပြောပေးပါဦး ဗျာ ကျေးဇူးတင်ချင်လို့ပါ
အစ်ကိုကြီး အမျိုးသမီးက သက်မွန်မြင့်လေးနဲ့မရိုက်ခင် သူအရင်ရိုက်ချင်လို့ပါတဲ့…
လက်ဝါးတစ်ပြင်ပြင်နဲ့ စောင့်နေလေရဲ့ ကိုကို…။
အော် ကိုနိုဇိုးမိကြီးတို့များ ရိုက်ချင်တဲ့လူတွေကို
ကျွန်တော် စာရိုက်တာ ကျန်သွားလို့ ဖြစ်ပါမယ်
သက်မွန်မြင့် နဲ့ က အိပ်မက်ထဲ ရိုက်မယ်လို့ ပြောတာ ထင်ပါတယ် ဗျာ
ဘယ် ကျွန်တော်က ဒါမျိုး လုပ်ရအောင် ကိုချောမှ မဟုတ်တာ
ကိုဝတုတ်ရေ နှစ်တစ်လေး ပြန်လု ပေးထားပါဦး ဗျာ
လေးဘလက်အမျိုးသမီးက သက်မွန်မြင့်လေးနဲ့မရိုက်ခင် သူအရင်ရိုက်ချင်လို့ပါတဲ့…
မနက်ကတည်း မန့်တာ ဦးလေးရေ… စက်က ကျသွားလို့…
ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပဲ ကိုင်ပေါက်ရမှာပဲ… အဟီး…
သမီးကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ နမ်းတဲ့အခန်းတွေထည့်တာကို ကန့်ကွက်ပါတယ် ဦးလေးရေ…
ဇီဇာကြောင်တယ်ပဲပြောရမလား…ခေတ်နောက်ကျတယ်ပဲပြောမလားတော့ မသိဘူး… မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူစိမ်းယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နမ်းတာကို ခံရမှာကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံပေးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်… ပါးဖြစ်ဖြစ်၊ နဖူးဖြစ်ဖြစ်..ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်…
ချစ်သူအချင်းချင်း ချစ်လို့၊ လက်ခံလို့ နမ်းကြတယ်ဆိုရင်တောင် မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းက လူမြင်ကွင်းမှာ ချစ်ရည်လူးကြတာကို လက်မခံကြသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်…
အရှည်ကြီးတော့ မပွားတော့ပါဘူး ဦးလေးရေ…
ဇာတ်ညွှန်းကို ပြင်ခွင့်မပြင်ခွင့်… မင်းသမီးအခွင့်အရေး..ဒါရိုက်တာအခွင့်အရေးတွေကို နားမလည်ပေမယ့် ဒီအခန်းကို လက်မခံတဲ့ သက်မွန်မြင့်ကိုတော့ ထောက်ခံပါကြောင်း…
မင်းတမီးလေးခညာ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခံစားပြီး …..
နာကျင်မှုနဲ့ နမ်းရမှာ ဆိုတော့ …
ဟုတ်ပါတယ်ဂျူဂျူးရေ သက်မွန်မြင့်ခမျာ ရင်နာနာနဲ့နမ်းရမှာ
တော်ကြာနမ်းရင်းက သူ့မယူခဲ့ရကောင်းလားဆိုပြီး ဆွဲကိုက်မိမှာစိုးလို့နေမယ်။
ဦးဘလက်ရေးတဲ့ ဟိုတစ်ခါ ကိုင်ဇာရဲ့ အနမ်းအကြောင်းပြီးလျှင် .. ဒီတစ်ခါ ဒုတိယမိ အနမ်းကြောင်းထင်ပါတယ်နော် … ။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ အရင်ကတော့ … တကယ်မနမ်းဘူးထင်တာပဲ … ဒါပေမယ့် လည်းမှတ်မှတ်ရရ ရန်အောင်နဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး .. ဘာကားပါလိမ့်မှတ်မိတော့ဘူး ။ အဲ့ဒီမှာ မောင်နှမဇာတ်ဝင်ခန်းမို့ ၊ ရန်အောင်ကို ညီမလုပ်သူ ထက်ထက်မိုးဦးက ပါးပေါ် နှာခေါင်းနှစ်ပြီး နမ်းလိုက်တဲ့ ပြကွက် ၊ ပရိတ်သတ်တွေကြားထဲ … ရေပမ်းစားသွားခဲ့သေးတယ် … ။ ဂျာနယ်တွေထဲ ၊ သရော်စာတွေထဲတောင်ရောက်လို့ ၊ အဲ့တုန်းကတော့ ကိုရီးယားကားခေတ်မစားသေးတော့ အမြင်စိမ်းနေသလိုပေါ့လေ .. ။ အဲ့ဒီကစလို့ နောက်ပိုင်းတွေ.. ပရိတ်သတ်မျက်စိ ယဉ်ပါးသွားပြီး ၊ သဏ္ဍန်လုပ်သရုပ်တူအောင် လိုက်လုပ်နေကြသလား မသိတော့ပါဘူး … ။ ဟီး … ပိတ်သတ်ဂျီးကတော့ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးဒယ် ခိခိ
အဲ့ထာလေ .. ကျွန်တော်က အဲ့လိုမျိုးအခန်းတွေပါရင်မရိုက်နဲ့လို့ ပြောထားလို့ပါ သူလေးခုတလော စိကားနားထောင်လာပီ
မြန်မာရုပ်ရှင် ရုံမှာသွားကြည့်တာ လျှုိုဝှက်သောနှင်း က နောက်ဆုံးဘဲဗျ။
သိပ်ကြိုက်တဲ့ ၀တ္တု ရသလေး တစ်ခါထည်းပျက်အောင်ပြီးစလွယ်ရိုက်လိုက်လို့။
ဘယ်အခန်းလဲဆိုတော့ စစခြင်း ဘဲ ထွန်းထွန်းဝင်း ရေခဲချောက်ထဲကျတဲ့အခန်း။
၀တ္တုမှာ ရှားပါးတဲ့ လိပ်ပြာနောက်လိုက်ရင်းချော်ကျတာ။
ရုပ်ရှင်မှာ ကလေးပြေးသလို အလကားနေရင်း တဟေးဟေးအော်ပြေးလို့ ပြုတ်ကျသွားတာ။
အဲတော့ မူရင်း ရသပျောက်ရော။
ဆရာကြီး ဦးသုခ က အင်တာဗျုးတစ်ခုမှာ ပြောတာကို ဖတ်ဘူးတယ်၊
“ခွင့်ပြုချက်သာရရင် ကမ်းစပ်မှာ နိုင်ငံခြားကလို အခန်းမျိုးရိုက်ရဲတဲ့ သူတစ်ပုံကြီးထက်”
နိုင်ငံတကာမှီဘို့ က သူတို့လို ချွတ်ပြခြင်းမပြခြင်းခ အရေးမပါ ပါဘူး။
သူတို့လို နမ်းပြနိုင်ခြင်းမပြနိုင်ခြင်းကလဲအရေးမပါဘူး။
ပေါင်တိုတို ၀တ်ခြင်း မ၀တ်ခြင်းကလဲအရေးမပါ ပါဘူး။
အဆီအသားမပါဘဲ အုပ်ချုပ်သူကို ကလော်ဆဲနိုင်ခြင်း မဆဲနိုင်ခြင်းကလဲ အရေးမပါဘူး။
အနုပညာသည်များက ယူထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ တန်တဲ့ အနုပညာရသကို ပေးနိုင်ဘို့ကအဓိကပါ။
မြန်မာပြည်မှာရုံတင်လို့ရတဲ့ငွေကြေးက နိုင်ငံခြားနဲ့စာရင် အများကြီးနည်းနေလို့
ခရီးသွားရင် တော့ မြန်မာဗွီဒီယိုကားတွေ မကြည့်ချင်လဲကြည့် ကြည့်ချင်လဲကြည့် ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် သရုပ်ဆောင်ပုံ ပြီးစလွယ်တွေဘဲတွေ့နေရပါတယ်။
ကျနော်တို့မြန်မာပြည်သူားအားလုံး အကြောင်းပြချက်တွေလျော့ပြီး လက်တွေ့အလုပ် လုပ်ပြကြဘို့လိုနေတာကတော့အမှန်ပါဘဲ။
I’d prefer acting rather than watching and talking
@ ဦးဦး ပါလေရာ :
ပထမဆုံးကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပါကြီးရေ…။
ကျော်ဟိန်းကြီးက ဇာတ်ညွှန်းပြင်လွန်းလို့ နာမည်ကြီးပါတယ်…။
ပြင်ပိုင်ခွင့်မရှိသူ ဆိုတာ ရှိနေပြန်ရောဗျာ…။
စိတ်ရှည်လက်ရှည် လေးလေးနက်နက် ရေးပေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက်
ကွန်းမန့်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုလည်း ကျွန်တော်
ကွန်းမန့် ၄ ခုတိတိရေးပြီး ပွဲစည်အောင် ထိန်းပေးခဲ့တာလေးအတွက်ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ…။
ညီလေးပြောတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လဇင် ဆိုတာလေးကလည်း မှန်နေပြန်ရောဗျာ..။
ဒီပို့စ်ထဲ သူကြီးပြောတဲ့ ကွန်းမန့်ထဲက စကားကိုမှ မခိုင်ဇာက
နမ်းတာမှာ အနုပညာရှိတယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ရမယ်…။
@ myanmar oscar :
ကွန်းမန့်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါ ကို မြန်မာအော်စကာရေ…။
ဘလက်ကြီးက အသားမည်းမည်း ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးရယ်ပါ…။
@ Ko Khin Kha :
ပြေတီဦး နဲ့ သက်မွန်မြင့်မို့လို့ပါပဲ…။
@ သကြားလုံးကြော် :
ပီဒီအက်ဖ် ဖိုင်တော့ ကျွန်တော်လည်း မရှိသေးပါဘူးဗျာ…။
@ Shwe Ei :
နမ်းတာမှာ အနုပညာရှိသတဲ့လား သူကြီးရေ…။
အိုဘားမား ကွန်းမန့်ကြီးအတွက်ပါ ကျေးဇူးအထူးပါ ကိုသစ်ရေ…။
@ ဦးကျောက်ခဲ :
@ တိမ်မည်း :
သက်မွန်မြင့်ကို အနိုင်ပေးသွားတဲ့ ကိုတိမ်မည်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..။
@ ရွာစားကျော် :
@ P chogyi :
ဦးဘလက်အတင်းပြောတာ ဆိုတော့လည်း အတင်းပေါ့ ပီချိုကြီးရယ်…။
@ နန်းတော်ရာသူ :
Pooch ပြောသလို မြန်မာကားတွေနမ်းတာကိုကြည့်ရမှာတော့
@ Thu Wai :
ကိုင်ဇာသီချင်းလေးနဲ့ ကွန်းမန့်လေးရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ကိုသုဝေရေ..။
နင်ပေးတဲ့လင့်တွေက ငါ အလွတ်ရနေတဲ့ အနမ်းတွေပါဝတုတ်ရယ်…။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်လက်ရှည် စိတ်ပါလက်ပါ ရေးပေးသွားတဲ့
ကွန်းမန့်ရှည်ကြီးအတွက် ဘီစီ ပေးချင်စိတ်တောင်ပေါက်မိပေမယ့်
သိတ်လေးနက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်မဟုတ်တော့ ဘီစီ မရွေးတော့ပါဘူးကွယ်…။
@ ချာတူးလန် :
ပီပြင်အောင် ရိုက်ပါ့မယ် ခင်ဗျာ…။
အောင်မယ် ပြောပြီးမှ လူကြီးက ရှက်နေသေးတယ်…။
အိမ်က မဒမ်ကြီးကို ပြစ်ချင်နေတာ မသိဘူးမှတ်လို့…။
@ လုံမလေး မွန်မွန် :
သက်မွန်မြင့်ကို ထောက်ခံသူများစာရင်းမှာ တစ်ယောက်ထပ်တိုးသွားတာ
@ ရွာသူ jujuma :
@ etone :
မတွေ့တာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ etone ရဲ့ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ဗျာ…။
@ myanmarcitizen :
သက်မွန်မြင့်က ခင်ဗျားစကားနားထောင်ပြီး မရိုက်ဘူးပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်…။
စိတ်ရှည်လက်ရှည် လေးလေးနက်နက် ကွန်းမန့်လေး ရေးပေးသွားတာကျေးဇူးပါ ကိုပေါက်ရေ…။
@ Silver Twig :
ကြာရင် ဟိုအခန်းမျိုးတွေ ပါလာမှာလားဟင်…